Baiboly pejy 673 - Ny Baiboly
Voalohany < 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 Manaraka Farany
Galata toko 4 (tohiny)
17Tsy rariny ny ataon-dry zareo mila fitia aminareo, fa tadiaviny hihataka aminay hianareo, mba hiraiketanareo aminy kosa. 18Tsara izany ilan'olona fitia, raha amin'ny zavatra tsara, mandrakariva anefa fa tsy hoe raha eo aminareo ihany aho. 19Anaka, aminareo aho dia mijaly hoatra ny mihetsi-jaza indray, mandra-paharin'ny Kristy ao anatinareo. 20Endrey izany faniriako ho eo aminareo ankehitriny, sy hanova ny feoko, fa mahasanganehana ahy loatra ny aminareo.
28Isika, ry rahalahy, no zanaky ny fampanantenana toa an'Isaaka. 29Fahizany anefa, ilay zanaka araka ny nofo dia nanenjika ny zanaka araka ny fanahy, ary toraka izany ihany koa ankehitriny. 30Saingy ahoana hoy ny Soratra Masina? Roahy io andevovavy io sy ny zanany, fa tsy hiray lova amin'izay zanak'andevo ny zanak'olona afaka. 31Koa amin'izany, ry rahalahy, tsy zanak'andevo isika, fa zanak'olona afaka.
22Ny vokatry ny Fanahy kosa dia izao: fitiavana, fifaliana, fiadanam-po, fahari-po, hamoram-panahy, hazavam-po, tsy fivadihana, 23fahalemem-panahy, fahalalana onona: tsy misy izay Lalàna mikasika an'ireo. 24Izay an'ny Kristy Jesoa dia efa namantsika ny nofony mbamin'ny faniriana amam-pilan-dratsiny tamin'ny hazo fijaliana. 25Velona amin'ny Fanahy isika, ka aoka handeha amin'ny Fanahy; 26fa aza te-hoderaina foana amin'izay fifampilàna kisa amam-pifampialonana.
Galata toko 6
Fifankatiavana - Fanaovan-tsoa - Fara teny momba ny famorana - Veloma.
1Ry rahalahy, raha misy olona azon-javatra tsy fidiny ka diso, dia aoka hianareo olona ara-panahy hananatra azy amin-kamoram-po, sy hitandrina fandrao mba azon'ny fakam-panahy koa. 2Mifampitondrà entana hianareo, dia ho tanterakareo amin'izany ny lalàn'ny Kristy; 3fa raha misy manao ny tenany ho zavatra, nefa tsinontsinona izy, dia mamita-tena izany. 4Samia mandinika ny asany avy, mba samy ho ny amin'ny tenany ihany no ho reharehany, fa tsy ho ny amin'ny an'olon-kafa, 5satria samy hitondra ny entany avy ny olona rehetra. 6Aoka izay ampianarina ny teny finoana hanome anjara izay mampianatra azy amin'ny fananany rehetra.
7Aza diso hevitra hianareo, Andriamanitra tsy azo vazivazina, 8fa izay afafin'ny olona no hojinjany: izay mamafy ho an'ny nofo moa, hijinja fahalòvana avy amin'ny nofo; fa izay mamafy ho an'ny fanahy kosa, hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. 9Aza ketraka amin'ny fanaovan-tsoa, fa hijinja amin'ny fotoana isika raha tsy ketraka.
Pejy: Voalohany < 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 Manaraka Farany
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.3405 seconds